Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket - HKT ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket - HKT
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket (HKT)
Famintinana ny seranam-piaramanidina Phuket (HKT-Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket). Thailand
Scheme Airport Phuket
Phuket antsipirian'ny fifandraisana seranam-piaramanidina sy ny fomba hahazoana
Sarin-tsarintany sy hevitra momba ny seranam-piaramanidina Phuket
Seranan-tsambo an-tseranana Phuket an-tserasera
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket Manompoa ireo tonga, ankoatra an'i Phuket tenany ihany koa Ranong, Phang Nga, Krabi ary Trang. Izany no seranam-piaramanidina lehibe atsimo atsinanan'i Thailand. Io no faha-2 ao amin'ny isan'ny mpandeha izay manompo isan-taona eo amin'ireo seranam-piaramanidina ao Thailand. Miasa tsy misy fanelingelenana izany. 32 km miala Phuket no misy azy. Ny dia mankany amin'ny hotely lehibe any amin'ny morontsirak'i Patong, Kata sy Karon dia maharitra adiny iray mahery, ary mankany amin'ny hotely Krabi - 2 ora eo ho eo. Momba ny. Phi Phi mety ho tratra avy aty an-tsambo amin'ny 2,5 ora, ary amin'ny sambo - ao anatin'ny 4 ora.
Ity seranam-piaramanidina ity dia afaka manompo sidina 1 ora 24. Tamin'ny 2007, vita ny fanamboarana azy, ka lasa nitombo ny isan'ny fisoratana anarana (misy 16 amin'izy ireo, misy 7) ary nitarina ny faritra malalaka.
Ny sakan'ny lalamby dia 45 m, ny halavany dia 3 km. Isan-taona, dia manompo olona 5 000 000 ny seranam-piaramanidina.
Seranam-piaramanidina Phuket sidina iraisam-pirenena mankany Singapore, Kuala Lumpur, Seoul, Beijing, Hong Kong.
Ny seranam-piaramanidina Phuket dia mendrika hohajaina. Madio sy malalaka ny anatiny. Fitsiky ny mpiasa ary tsy mivadika be. Kitapo kelin'izay kely tsy hita amin'ny tsikitsiky. Mangataka ny hahita toerana eo akaiky eo, ary mahazo fahafaham-po tsy misy hatak'andro raha azo atao.
Ny seza any amin'ny faritra miandry dia mahazo aina. Misy harato ho an'ny fitaovana fiampangana, ary misy milina miantsine manana rano fisotro maimaim-poana.
Ny hanitra menaka sy voninkazo tsy manelingelina dia mitsinkafona eny amin'ny rivotra.
Nanomboka ny volana febroary 2019 dia nohidiana daholo ireo faritra mifoka sigara. Ankehitriny, raha afaka mifoka sigara izy ireo, dia nanao dobo fitandremana izy ireo.
Scheme Airport Phuket (rihana voalohany)
Ity ny efitrano fahatongavana, departemanta hita ary very entana, takelaka fampandrenesana, fisavana valizy, trano fisakafoanana, kafe, fanaraha-maso pasipaoro, adidy maimaim-poana, ary eto dia toerana hanaovana ny fihaonana.
Eto, eo amin'ny tany ambanin'ny terminal, misy ny fanofaanana fiara, trano manofa limousina, ATM, SIM karatra amidy, fifanakalozana fifanakalozana ary trano fitateram-bahoaka ho an'ireo izay tonga tamin'ny alalàn'ny fizahan-tany sy toby fitateram-bahoaka kely ho an'ireo izay tonga irery tamin'ny fivoahana avy amin'ny terminal.
Seranam-piaramanidina Phuket. Tetika. Rihana voalohany.
Eto ianao dia hahita tobim-pitsaboana, toeram-pivarotana, teboka famerenan'ny VAT, fangatahana vaovao, tsy misy adidy, trano fisakafoanana ary trano fisotroana, fifehezana pasipaoro, fitrandrahana ary fifehezana pasipaoro amin'ny fialana. Aorian'ny fandalovan'ny taratasim-bola, dia misy fizarana roa ny seranam-piaramanidina, ho an'ny sidina iraisam-pirenena (iraisam-pirenena) ary ho an'ny tokantrano (an-trano).
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket eo amin'ny sarintany, ary antsipiriany momba ny fifandraisana
Address: Mai Khao, Distrikan Thalang, Phuket 83110, Thailand
telefaonina: + 66 76 351 122
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Patong Beach tokony ho 42 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany afovoan-tanàna manodidina ny 33 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket ka mankany amin'ny ranomasina Beach eo amin'ny 44 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany amin'ny tapakilan'ny fiara fitaterana ho 35 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Laem Phromthep manodidina ny 50 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Pantai Beach eo amin'ny 51 km
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Chino Portogaly tokony ho 32 kilometatra
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket mankany Laem Panwa tokony ho 45 kilometatra
Ho any amin'ny seranam-piaramanidina Phuket, avy amin'ny fitateram-bahoaka dia misy fiara fitateram-bahoaka fotsiny avy any afovoan-tanànan'i Phuket
Saingy ao amin'ny toerana lehibe mpizahatany any Phuket, ny manodidina anao dia afaka mahita tolotra ho an'ny fifindrana amin'ny seranam-piaramanidina, miaraka amin'ny mari-pahaizana fampiononana isan-karazany. Avy amin'ny 150 baht (mankany Patong) etsy ambony.
Ohatra, serivisy famindrana entana avy any ary mankany amin'ny seranam-piaramanidina Phuket. Miasa manodidina ny famantaranandro:
Eto ambany ny rohy dia misy serivisy famandrihana atolotra an-tserasera ho an'ny fifindrana na mankany amin'ny seranam-piaramanidina Phuket.
Ny karazana fitaterana, avy amin'ny limousine mankany anaty fiara fitaterana.
Na ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana ny baiko famindrana Kiwitaxi amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany:
Review momba ny seranam-piaramanidina Phuket (famerenana Google)
Tsara ny manana ilay fampahalalana ilaina haingana indrindra ny pejy. Ho fanampin'izany, misy fomba iray mankany amin'ny scoreboard an-tserasera.